Blogs: के हो ताराफल (star fruit?? कसरी खेती गर्ने?
के हो ताराफल (star fruit?? कसरी खेती गर्ने?
के हो ताराफल?*********????️ तारा फल ⭐️ ( Star fruit ) ; जसको बैज्ञानिक नाउँ Averrhoa carambola हो । यसलाई छोटकरीमा कहिँकतै carambola भनेर चिनिन्छ । यो ओग्जालिडेशी ( Oxalidaceae ) परिवारमा पर्दछ । यसलाई काटदाखेरी तारा जस्तो देखिने भएकाले Star fruit भनिएको हो । सामुन्द्रीक सतहदेखी ४००० मिटरसम्मको उचाइमा यसको खेती गर्न सकिने तारा फल उत्पत्ति स्थल बारे यकिन गर्न नसकिए तापनि इन्डोनेसिया , फिलिपिन्स , मलेसिया , भियतनाम , नेपाल , भारत , बाङ्लादेश र श्रीलंका जस्ता देशमा पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारत यो फल उत्पादन गर्ने प्रमुख देशमध्यको एक हो । गर्मि याममा भारतको लखनउमा निकै प्रसिद्ध छ । नेपालमा पाइने उन्नत जात भारतिय नै हुन ।...
कुन आँप कसरी चिन्ने ??
आँपबाट थुपै थरिका मिठो र स्वादिष्ट परिकार पनि बनाउन सकिन्छ, जस्तै आँपको चटनी, आँपको जुस, आँपको जाम, आँपको माडा, आँपको स्क्वास, आँपको क्याण्डि, आँपको अचार लगायतका थुप्रै परिकारहरु बनाउन सकिने व्यापारीहरुले बताए। साथै आँपमा शक्ति, कार्वोहाईडेट, प्रोटिन कोलेष्ट्रोल, डाण्टरी रेशा, भिटामिनहरु सि, ए, ई र के, सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम लगायतको थुप्रै तत्वहरु पाउन सकिन्छ। बजारमा चलेका आँपका जातहरु::दशहरी- यो बजारमा आउने आँप मध्ये एक प्रख्यात आँपको जात हो। यो आँपको रुख मध्यम आकारको हुन्छ। यो आँप सिधा, फल मध्यम, फलमा नाक नभएको लाम्चो, गुदी पहेंलो, रेशा विहिन ठोस गुदी,...
धानखेतटमा नाइट्रोजन बढाउने, पशुपालनमा दानाको खर्च घटाउने एजोला (Azola) बारे बुझौ!
के हो एजोला (Azola) ?एजोला पानीमा तैरने वनस्पती हो । प्रसस्त पानी भएको ठाउँमा यिनीहरु विश्वभरनै पाइन्छ । पानीमा हुने मखमल, जल उनिउ, हांसको झार र रातो एजोला जस्ता नामले पनि चिनिने एजोला उष्ण, समषितोष्ण र उपोषण क्षेत्रमा पाइन्छ । अत्यन्तै चिसो र अत्यन्तै सुख्खा ठाउँमा भने यो पाइदैन । विश्व खाद्य सँस्थाको अनुसन्धान अनुसार एजोला पिनाटा र एजोला फिलिकुलोइड्स नेपालका पोखरी र दबदबे जग्गामा धेरै पाइने गरेको छ । दुइटा लोब हुने पातहरु पालैपालो रहेका हुन्छन् । जमिन पटिको लोब बाक्लो हुन्छ र यसमा टोड्को (क्याभिटि) हुन्छ जसमा साइनोब्याक्टेरिया भेटिन्छन् । साइनोब्याक्टेरिया...
नेपालमा कृषि क्रान्ति; कस्को भरमा??
सिन्धुपाल्चोकको मेरो घर र खेतबारी सम्झिन्छु; सानो हुदाको बेलाको। हाम्रो खेती थोरै थियो, अहिले भएको जमिनको लगभग आधा मात्र। मेरो बुबा स्कुलमा पढाउनु हुन्थ्यो, हामी सानै थियौं हामी पनि पढ्न जान्थ्यौं। घरमा २ वटा ठूला पशु थिए, १०-१२ वटा बाख्रा, ५-७ वटा कुखुरा र सबैको व्यवस्थापन गर्ने मेरो आमा। त्यसबाहेक ६ पाथी धानको विउ लाग्ने खेत र केहि सिंञ्चाई नहुने र २ बाली मात्र हुने बारी। शुक्रवारको आधा दिन र शनिवारको दिन हामी सानै उमेर देखिनै खेतिपातीको काममा व्यस्त हुन्थ्यौं। हिँउदको महिनामा बेलुका स्कुल बाट आएर बारीमा जान समय पुग्दैनथियो तर सबै सिजनमा विहान घाँस काट्ने...